Yini ukulandela intando KaNkulunkulu? Ingabe ukulandela intando kaNkulunkulu uma umuntu enza umsebenzi wokuhambisa ivangeli likaNkulunkulu kuphela? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Laba bantu basondela kimi ngomlomo wabo, futhi bangidumisa ngezindebe zabo; kodwa inhliziyo yabo ikude nami. Kodwa …
Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Uma uthokozela umusa kaNkulunkulu kuphela, unempilo yomndeni enokuthula noma ukubusiseka ngezinto eziphathwayo, lap…